GREFTP Vakinankaratra : mpitantana vaovao Rakotozafy Isabelle | NewsMada
GREFTP Vakinankaratra : mpitantana vaovao Rakotozafy Isabelle
Mijoro efa ho taona vitsivitsy ao anivon’ny foibem-paritry ny fampianarana sy ny fampiofanana ara-teknika sy araka asa ao Vakinankaratra ny fikambanana iray ivondronan’ireo sekoly misahana ny fampianarana sy ny fampiofanana ara-teknika enina misy. Eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Fampianarana sy fampiofanana ara-teknika sy arakasa ny fikambanana io ary antsoina hoe Groupement régional de l’enseignement technique et de formation professionnelle (GREFTP).
Ho fanatsarana sy ho fampivoarana ity taranjam-pianarana ara-teknika ity no antom-pisiany. Najoro indrindra koa handrindra ny fandaharam-pianarana sy ara-pitantanana ireo sekoly teknika enina mivondrona ao anatin’ny GREFTP, araka ny nambaran’ny talem-paritry ny fampianarana sy fampiofanana teknika ao Vakinankaratra.
Misy filan-kevi-pitantanana ao anivon’ny GREFTP, araka izany, ary eo ambany fitarihan’ny filohany, na « président du conseil d’administration » (PCA), izay miandraikitra indrindra ny fanaraha-maso sy ny fanatanterahana ireo andraikitra voalaza tetsy ambony ireo sy ny hafa koa. Roa taona ny fe-potoana hiasan’ny PCA ary tompon’andraikitra ambony avy ao amin’ny minisitera miahy ny fampianarana sy ny fampiofanana ara-teknika sy arakasa ihany no notendrena ho PCA.
Natao ny alarobia lasa teo tao amin’ny biraon’ny faritra Vakinankaratra ao Antsirabe ny fivoriana voalohan’ny filan-kevi-pitantanan’ny GREFTP tamin’ity taona ity. Tamin’izany ihany koa no nifidianana izay ho PCA vaovao izay hitantana azy indray mandritra ny roa taona. Tapitra ny taona 2015 ny naha PCA an-dRaharinjato Herisoa ary nosoloin-dRakotozafy Isabelle, mpanolotsaina teknika avy ao amin’ny minisitera mpiahy ihany. Izy no lany ho PCA vaovao hitantana ny GREFTP.